कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् - Internet Khabar
Home Health कपाल झर्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
काठमाडौँ । भनिन्छ, मानिसको सुन्दरता हेयर स्टाइलमा पनि हुने गर्दछ। त्यसैले कपाललाई लामो, बाक्लो र कालो बनाउने चाहाना धेरैको हुन्छ। तर कपाल झर्ने समस्याले धेरैलाई दिक्क बनाएको हुन्छ। आज हामी तपाईलाई कपाल झर्न रोक्ने केही उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
कपाल झर्ने समस्या रोक्न ध्यान दिनुहोस् यी कुरा
तातोपानी प्रयोग नगर्नुहोस् : तातो पानीले कपाल डिहाइड्रेटेड हुन्छ र टुक्रिन थाल्छ। त्यसैले कपाल धुनका लागि तातो पानीको प्रयोग सकभर नगर्नुस। कोठाको तापमान वा त्यसभन्दा अलिकति चिसो पानी प्रयोग गर्नु सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ।
कपाललाई बाँधेर नराख्नुहोस् : कपाललाई कसिलो गरी बाँधेर राख्यो भने चाँडै टुट्न थाल्छ । यसले चाया पर्ने र चिलाउने समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले कपाल सकेसम्म खुल्ला नै छोड्नुहोस, अन्यथा खुकुलो गरी बाँध्नुहोस । हेयरब्यान्ड, स्कार्फले कपाललाई लामो समयसम्म ढाकेर राख्यो भने पनि घर्षणले गर्दा कपाल टुट्न सक्छ ।
तनावबाट मुक्त रहनुहोस् : धेरै तनाव लिने व्यक्तिहरुको कपाल झर्नुका साथै चाँडै फुल्छ पनि । यसले कपालको वृद्धिमा पनि नकारात्मक असर पुर्याउछ। त्यसैले औषधि र योगले आफ्नो तनाव कम गर्नुस।
सागपात र फलफुलको सेवन: आफ्नो खानामा प्रोटिन र आइरनयुक्त खाद्यपदार्थ समावेश गर्नुस। हरियो पत्तेदार सागपात, किसमिस, अन्डा, ब्रोकाउली, दही, बदाम इत्यादिको सेवन गर्नुस।
चिसो कपाल नकोर्नुहोस् : चिसो कपाल अत्यन्तै कमजोर हुन्छ। त्यो एकदम छिटो टुक्रिन सक्छ । त्यसैले चिसो कपालमा काइयो नदौडाउनुस् । यसका साथै प्लास्टिक वा पातलो दाँतबाला काइयोले पनि कपालमा नोक्सानी पुर्याउछ। कलाललाई हावामा सुक्न दिनुस र मोटो दाँत भएको काइयोले कोर्नुहोस्।
स्टाइलिङ प्रोडक्टको प्रयोगमा सतर्कता : हेयर स्टाइलिङ प्रोडक्ट, जस्तै जेल, क्रिम आदिले कपाललाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ। यिनीहरुको प्रयोगपश्चात कपाललाई राम्ररी धुन नभुल्नुस्। अन्यथा यी वस्तु कपालको छालामा टाँसिएर रहन्छन् र कपालको वृद्धिलाई अवरोध पुर्याउछ।
समय-समयमा कपाल छाँट्नुस: कपाललाई नियमितरुपमा ट्रिम गर्नाले कपालका टुप्पोलाई पुग्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ। हरेक प्रकृतिका कपालको ट्रिम गर्ने समयावधि अलग अलग हुन्छ । आमरुपमा चारदेखि ६ महिनामा कपाल ट्रिम गर्नुपर्छ। यसले कपालको हाँगा फाटेर रुखो हुँदैन।
Previous articleअसार २२ गतेबाट भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइने
Next articleनेपालको नक्सा र विदेश नीति फेरबदल हुनसक्दैन : प्रधानमन्त्री